Iimveliso zePolish abavelisi kunye nabanikezeli - China iiPolish zeekhompawundi zeFektri
Sanding Disc Imingxuma iphepha Sanding for wokucoca ...
Ezilahlwayo Painting Gun Cup
Ishedyuli yeSandpaper Sheet yeRandom Orbital Sander-A720T
Ukuthengisa ngokuBanzi ngokuSebenzayo ngokuKhawulezayo kweWax kwimoto-XYS-A2
I-XYS-A2 Compound Rubbing Compound
I-XYS-A2 Fast Wax iyimveliso egxila kumthwebeba oxekileyo kunye nesipili somthwebeba. Inokuphelisa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo amanqaku esandpaper ashiyekileyo emva kwesanti P1500-P2000 sandpaper kwaye ifezekise umphumo wesipili. Ukugxininisa okuphezulu, ukusika okufana ne-emulsion-like form are "one-step polishing," ukusebenza kakuhle, isantya esiphezulu, kunye nokuhomba okuphezulu.
ICANDELO LOKUQHUBA KAKHULU LOKUQHAWULA IPOLISI-XYS-CY0815
Le mveliso yiarhente yepeyinti enobuchule esetyenziswa kumatshini wokucoca ngesantya esijikelezayo se-1400-2000 rpm. Ingazisusa ngokufanelekileyo iimpawu zesanti ze-P1000-P1200 sandpaper kunye neminye imikrwelo enzulu kunye neelayidi ezinzima. Ukuba usebenzisa i-XYS CY-0187 Fine Polishing Wax, umphumo ungcono!